ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता ४ हजार - ढोरपाटन पोष्ट
२०७८ जेष्ठ १६, आईतवार ०७:०८
सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता बढाएर मासिक ४ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । शनिबार आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दा ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता एक हजार बढेको हो ।
वजेटमा सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षाका लागि १ खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले भाषणमा बताउनुभयो । बढेको भत्ता १ साउनबाट कार्यान्वयनमा आउने छ ।
अनाथ, दलित, अपाङ्गता भएका र विपन्‍न परिवारका बालबालिकालाई प्रदान गरिने बाल संरक्षण अनुदानको रकममा एक तिहाई वृद्धि गरिएको छ ।
तत्कालीन एमाले सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०५१-०५२ को बजेटमा पहिलो पटक बृद्धभत्ताको नीति सुरु गर्नुभएको थियो । त्यसबेला बृद्धभत्ता पाउने उमेर ७५ वर्ष तोकिएको थियो र मासिक भत्ता जम्मा १ सय रुपैयाँ थियो ।
पछिल्ला वर्षहरुमा बृद्धभत्ता चुनावी गोटी बनेको भन्दै अर्थविद्हरुले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका थिए ।
यस अघिका अर्थमन्त्री युवराज खचिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को बजेटमा वृद्धभत्ता एक हजार बढाएर ३ हजार पुर्याउनुभएको थियो । यो वर्षपनि १ हजार बढेको छ ।
सुरुवात गर्दा, तत्कालीन अर्थमन्त्री अधिकारीले २०५१-०५२ को बजेटमा सुरु गर्दा मासिक बृद्धभत्ता सय रुपैयाँ थियो । २०६० सालमा अधिकारीले वृद्धभत्ता वृद्धि गरि मासिक १७५ रुपैयाँ पुग्यो ।
२०६५ सालमा बाबुराम भट्टराईले यस्तो भत्तामा भारी वृद्धि गरि मासिक ५ सय रुपैयाँ पुर्‍याउनुभयो । २०७१ सालमा कांग्रेसका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले एक हजार पुर्याउनु भएको थियो । अर्को वर्ष २०७२ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले एक हजार रुपैयाँ वृद्धिगरि मासिक दुई हजार पुर्याउनुभएको थियो । उक्त रकमलाई २०७६ सालमा डा. युवराज खतिवडाले मासिक ३ हजार पुर्याउनुभएको थियो ।